#BIM - Koorsada Aasaasiyada Dhismaha iyadoo la adeegsanayo Revit - Geofumadas
#BIM - Koorsada Aasaasiyada Dhismaha iyadoo la adeegsanayo Revit
Luulyo, 2019 Koorsooyinka AulaGEO
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato arrimaha ku saabsan Revit ee dhismaha mashruuca
Koorsadan waxaan diirada saareynaa inaan ku siino qaababka shaqo ee ugu wanaagsan ee lagu baari karo aaladaha Revit ee moodeelada dhismayaasha heer xirfad leh iyo waqti aad u gaaban. Waxaan u adeegsan doonnaa luuqad sahlan oo fudud oo fahmaysa luqadda si aan uga soo qaadno aasaaska ilaa qoto dheer u adeegsiga barnaamijkan weyn.
Sababta dhabta ah ee loo barto Revit waa in la adeegsado tikniyoolajiyadda BIM. Haddii kale, waxay noqon laheyd barnaamij lagu sawiro dhismayaasha. Laakiin sidaad ku arki doontid koorsada, waxaa jira kuwa kaloo badan oo ka dambeeya barnaamijkan awoodda leh. Waxaan xoojin doonaa maamulka macluumaadka.
Si ka duwan koorsooyinka kale ee xaddidan oo keliya muujinta adeegsiga aaladda, waxaan ku siin doonnaa tilmaamo kaa caawin doona inaad ku hirgasho nidaamka BIM ee mashruucaaga.
Imaatinka Ingiriisiga AulaGEO goor dhaw.
Hada waxaa kaliya lagu heli karaa Isbaanish
Koorsooyinka BIM Koorsooyinka Dhismaha ee BIM Koorsooyinka soo celinta
Post Previous«Previous #CODE - Horudhac Koorsada Naqshadeynta adoo adeegsanaya Ansys workbench
Post Next #BIM - Koorsada Koorsada Koorsada (Farsamada, Korantada iyo Dhuumaha)Next »
Hal Jawaab "#BIM - Koorsooyinka aasaasiga ah ee Dhismaha Dhismaha iyadoo la adeegsanayo Revit"
Abdurahim isagu wuxuu leeyahay:
Abriil, 2020 at
QGIS iyo barnaamijyada mobilada ee bilaashka ah